IPunta Cana-Izinto ezibalulekileyo ekufuneka uyenzile kwaye uzibone | Uhambo olupheleleyo
Izinto ezibalulekileyo onokuzenza kwaye uzibone kuhambo lwakho lokuya ePunta Cana
USusana godoy | | Republic Dominican
Ngokungathandabuzekiyo, iPunta Cana yenye yezona ndawo zifunwa kakhulu. Kuba ngokukhankanya nje igama layo, siyaqonda ukuba iilwandle yiparadesi efunwa luninzi lwabakhenkethi, kodwa kuyinyani ukuba ukongezelela ukonwabela ezo mbombo zelanga, isanti kunye namanzi e-turquoise, Uhambo oluya ePunta Cana lusishiya sinezinto ezingapheliyo zokuzibona.
Mhlawumbi unayo ingcamango ukonwabela ezinye iilwandle zalo ezinomdla, kwaye ngokuqinisekileyo yenye yezinto ezibalulekileyo phakathi kweeholide zasePunta Cana.. Kodwa ekubeni uyonwabele iintsuku zokuphumla, unezinye iindlela onokuthi uzithande. Ukuba awuyazi ukuba ungaqala ngaphi, ungakhathazeki, sikwenzele umsebenzi. Ngaphambi kokuba ucime ngokupheleleyo, khumbula ukukhetha i indiza kunye nehotele ePunta Cana. Ngoba? Kuba uya kuhamba kunye nokhuseleko kunye nentuthuzelo yokuba yonke into ivalwe kakuhle okanye ibotshwe. Ngoku ewe, wamkelekile okanye wamkelekile kwiholide yakho!
1 Lungiselela uhambo lwakho oluya ePunta Cana kunye nephakheji yeholide equka konke
2 Uhambo lokuqala olucetyiswayo: Los Haitises National Park
3 Ukutyelela kwi-Isla Saona
4 Ukuntywila kwiSiqithi saseCatalina
5 ISanto Domingo, olona tyelelo lwenkcubeko
6 Eyona misebenzi ilungileyo onokuthi uziqhelanise nayo ePunta Cana
Lungiselela uhambo lwakho oluya ePunta Cana kunye nephakheji yeholide equka konke
Inyathelo lokuqala lokukwazi ukuzonwabisa ngakumbi kunakuqala kukukhetha iholide yePunta Cana equka konke. Kungenxa yokuba kuphela apho siyazi ukuba sinerejimeni yokuhlala ebandakanya zonke iinkonzo. Ke ngale ndlela, kuya kufuneka ugxile ekonwabeni yonke imisebenzi onomdla kakhulu kwaye uzivumele uhambe ngesantya esikhululekileyo, ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba ungatya phi okanye nini. Kakade ke, kwezinye iimeko Xa sithetha ngeehotele zasePunta Cana, kufuneka sikhankanye izinto ezintle esinokuzifumana kuzo. Oku kuthetha ukuba kuya kubakho iintsuku ekungeyomfuneko ukuba uphume, kuba uya kufumana yonke into obuyifuna.
Ewe, xa sisenza ugcino lwehotele, kufuneka sicinge ngolunye ukhetho olufunwa kakhulu olujolise kwinqwelomoya kunye nehotele yasePunta eKana. Ngale ndlela, sinokufumana izibonelelo eziya kuhlala zamkelekile.
Uhambo lokuqala olucetyiswayo: Los Haitises National Park
Sele senze ubhukisho lohambo lwethu oluya ePunta Cana, ke sakuba sizinzile, i-adventure iyaqala. I-adventure eqala kwenye yeendawo zokuqala zokundwendwela. Le yiPaki yeSizwe emi kwiBhayi yaseSamaná. Uyakonwabela indawo ekude kuzo zonke iindawo zokuchithela iiholide kule ndawo. Kuyo uya kufumanisa into ebizwa ngokuba 'yi-mogotes' eluhlobo oluthile lweendawo eziphakamileyo okanye umhlaba ophakamileyo owenziwe yindalo. Ungafika ngolwandle kwaye ufumanise imiqolomba eyahlukeneyo ukuba indawo efana nale zindlu, igcwele iimfihlo kodwa intle kakhulu.
Ukutyelela kwi-Isla Saona
Lolona hambo lufunwa kakhulu kwaye isizathu kukuba inamanxweme amahle agcwele imithi yesundu, kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ahamba kunye nezixhobo zekorale. Ayinakuphepheka into yokuba iihotele ePunta Cana zidityaniswe kwezona phakheji zicetyiswayo okanye amaxesha olonwabo. Apho uya kufumana iMano Juan, eyilali ezolileyo yokuloba., eya koyisa, ngenxa yeekhabhathi zayo ezimibalabala nokuba yingcwele yamafudo.
Ukuntywila kwiSiqithi saseCatalina
Esinye seziqithi onokuthi undwendwele sesi. Ebizwa ngokuba nguCatalina kuba leyo yindlela uChristopher Columbus awamthiya ngayo emva phayaa ngowe-1494. Yenye yezona ndawo zikhenketha kakhulu kwaye kuyo ungathathwa yimisebenzi efana nokuntywila. Ihlala iyinto eqhelekileyo kwiindawo ezinjalo ezidumileyo. Ke, emva kokuhambahamba esiqithini, akukho nto ifana nokukhetha umthambo omncinci. Uya kuthandana neembono zayo ezigcwele indalo.
ISanto Domingo, olona tyelelo lwenkcubeko
Ukuba ngolunye usuku uvuka kusasa kwaye ufuna ukwenza ukhenketho lwenkcubeko, akukho nto ifana nokuya eSanto Domingo. Ukusuka ePunta Cana kukuhamba malunga neeyure ezintathu ngemoto. Kodwa kuya kuba nexabiso, kwaye kuninzi. Kuba sesinye sezona zixeko zindala kwiCaribbean yonke. Ineziko lembali elibiyelweyo kunye nezakhiwo ezisusela kwinkulungwane ye-XNUMX. Kwakhona kule ndawo unokonwabela i-cathedral yokuqala kunye nenqaba ukuba iMelika yayinayo. Akumangalisi ukuba iNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi
Eyona misebenzi ilungileyo onokuthi uziqhelanise nayo ePunta Cana
Kwindawo nganye elunxwemeni, eyona ininzi kakhulu njengoko besitshilo ngaphambili, awuyi kuhlala ugcakamela ilanga okanye uhlamba. Ngoko unokutshala ixesha kwizinto ezikhethekileyo. Siye sakhankanya ukuntywila kodwa Kananjalo ungalibali ukuhamba kwiindawo ezinesanti kwi-quad okanye ukukhwela ihashe. Yintoni ongayithanda ngakumbi? Mhlawumbi ukwazi ukubhabha phezu kwendawo okanye ukuziqhelanisa nokusefa. Ngaphandle kwamathandabuzo, kukho iinketho zokhetho ngalunye. Bheja kwiholide yephupha kwaye ungakhathazeki ngepokotho yakho kuba indiza yasePunta Cana kunye nehotele inokuhamba kunye, kwipakethi kwaye ikugcinele i-pinch elungileyo. Ngaba siza kupakisha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Izinto ezibalulekileyo onokuzenza kwaye uzibone kuhambo lwakho lokuya ePunta Cana
Ukutyelela iSri Lanka: ngaba abakhenkethi baseSpain bafuna iVisa?